Madaxweynaha Soomaaliya oo Gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Soomaaliya oo Gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud[Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey.
Wafdiga Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa Cadaado kusoo dhaweeyey madax ka tirsan dawladda,Maamulka Ximan iyo Xeeb ,qeybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa markii uu ka degay garoonka diyaaradaha loo gelbiyey aqalka Madaxtooyada Ximan Iyo Xeeb halkaasoo u kulamo kula qaadan doono mas’uuliyiinta dawlada iyo maamulka deegaanka.
Booqashadan ayaa noqoneysa tii u horeysay uu Cadaado ku tago Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ,waxaana la sugaya in magaalada uu ka furmo dhawaan shirka maamul u sameynta gobollada dhexe ee Koonfurta Mudug iyo Galgaduud.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Madaxda maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa lagu wadaa iney isla meel dhigaan wakhtiga saxda ah ee la qabanayo shirka maamul u sameynta gobollada koonfurta Mudug iyo Galgaduud.
Ciidamo ka tirsan dawladda Iyo kuwa AMISOM oo shalay gaaray degmada Cadaado ayaa si weyn u sugaya ammaanka magaalada .